Etazonia dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Taom-baovao 2020 14 ora alohan'ny Washington DC: Biba Anu Nuebu
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Etazonia dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Taom-baovao 2020 14 ora alohan'ny Washington DC: Biba Anu Nuebu
Desambra 31, 2019
Etazonia dia niditra an-tsokosoko tamin'ny folo taona vaovao 14 ora talohan'ny nahatongavan'i Washington DC.
Tratry ny taona! Biba Anu Nuebu! Raha nanisa ny Taom-baovao 2020 i Guam dia tamin'ny 10.00 maraina fotsiny tany New York ny 31 desambra niaraka tamin'i Guam, niditra an-tsokosoko tamin'ny taom-polo taona vaovao i Etazonia.
Ny nosy paradisa Guam izay misy sidina adiny iray monja avy any Manila dia naneno tamin'ny Taom-baovao USA. Isan'andro dia manomboka ny andro ho an'i Amerika i Guam, ary nanao izany tamin'ny misasakalina niaraka tamin'ny fety, afomanga ary hetsika maro izy ireo, tsy tao amin'ireo hotely fialantsasatra malaza ihany ity paradisa fialantsasatra ity. Nahafinaritra ny alina tamin'io Guam.
Ho feno hipoka ny morontsiraka anio amin'ny 1 Janoary ary miaraka amin'izay koa, hilatsaka ny baolina i New York.
sambatra Taom-baovao ihany koa ny Samoa sy ny Nosy Christmas any Kiribati - ireo firenena voalohany manerantany niditra tamin'ny taona 2020.
In Samoa, Taom-baovao Somary somary maizimaizina kokoa noho ny mahazatra i Eva raha ny fandinihana ny firenena dia nandalo nofy ratsy momba ny fahasalamana tamin'ny kitrotro nahafaty am-polony maro. Raha nipoaka ny afovoany avy teo amin'ny Tendrombohitra Vaea, nanatrika ny renivohitra Apia, ny tapaky ny taona dia fotoana alahelo sy fahatsiarovana.
Fampisehoana afomanga mahatalanjona avy amin'ny Sky Tower no nandefa an'i Auckland, New Zealand mankalaza ny taona vaovao. Ny fampirantiana afomanga lehibe indrindra any Nouvelle-Zélande dia niaraka tamin'ny laser sy sary mihetsika, voalohany ho an'ny Sky Tower.
Ny governemanta Fiji dia fandrarana kitapo plastika hatramin'ny androany ary ny firenena dia manatevin-daharana ny lisitr'ireo firenena Pasifika mihamitombo hatrany hanao izany.
Nosy Marshall, Vanuatu, Niue, Samoa ary ny fandraràn'i Nouvelle-Zélande dia efa manan-kery raha ny firenena faran'izay be mponina ao Pasifika, Papua New Guinea, kosa dia manatevin-daharana azy ireo amin'ny faran'ny volana manaraka.
Mitokona any amin'ny seranam-piaramanidina Montréal ny mpiasa Swissport
Symphony of Light New Year tany Hong Kong dia nahagaga tamin'ny lafiny maro